सोनिकाको जवाफ: १२ करोड चो’रे’को हुँ, शहरले ह’रा’मी बनायो अब बझाङ्बाट फर्किन्न हेर्नुहोस भिडियो
May 12, 2020 May 12, 2020 by साहारा संदेश
काठमाडौं । आफुलाई पूर्व युवराज पारसको १२ लाख चोरी गरेको आरोप लागेपछि युट्युवर तथा मोडल सोनिका रोकाय आ क्रो शित भएकी छन् । उनले फेसवुक लाइभ मार्फत सो कुराको जवाफ दिँदै त्यसको ब्याग्यात्मक प्रतिकृया दिएकी छन् । वझागंका एक आफन्तसंग कुरा गरेकी सोनिकाले आफुले १२ लाख होइन १२ करोड चोरेको भन्दै ब्याग्यात्मक प्रतिकृया दिएकी छन् ।
उनले आफ्ना विरुद्ध एक पछि अर्को झुटो आरोप आउने गरेको गुनासो पनि गरेकी छन् । कुन दिन जन्मेछु जस्तो लागेको छ, मेरो भाग्य नै फु टे छ की के हो ? हेर त भाई १२ लाख चोर्न भुत पठाएको हो की क्या हो ? प्रहरीले पनि लग्दैन की क्या हो । म त अब पुलिसलाई १२ लाख होइन १२ करोड चोरेको हो भनेर भन्दा पनि पत्याएन ।
पुलिसले पनि लगेन के गर्ने होला ? उनले भनिन् । एक युवकलाई भाई भन्दै उनले भिडियो च्याटमा जति आरोप आएपनि हाँसेर बाँच्ने बताएकी छन् । उनले आफ्नो बारेमा नकारात्मक टिपपणी हुने गरेको बताएकी छन् । देशको ढुकुटी अरुले सके तिमीहरु १२ लाखको पछि लाग उनले भनिन् । पूर्व युवराज पारस शाहसंग नजिकको सम्बन्ध रहेकी युट्युवर
तथा मोडल सोनिका रोकायका बारेमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा अचम्मको कुरा चर्चामा आएको छ । एउटा अनलाईन मिडियाले लेखेको सो समाचारलाई माध्यम बनाएर थुप्रै सामग्री बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उछितो काडिरहँदा सोनिका भने विपन्नलाई सहयोग गर्न गाउँ गाउँ पुगेकी छन् । उनलाई पूर्वयुवराज पारस शाहसंग जोडेर विभिन्न समाचार बनाइएका छन् ।
हुन त उनीहरुको सम्बन्धलाई मिडियामा चर्चा भइरहन्छ । उनीहरुलाई गसिपको माध्यम बनाइन्छ । तर यस्ता गसिपवाट उनीहरुले प्रवाह भने गरेको देखिदैन । तर अहिले भने फरक कुरा बाहिर आएपछि पारस र सोनिका दुवैले यसको प्रतिकृया दिएका छन् । सोनिकालार्य पटक पटक गरेर पारसको एटिएम प्रयोग गरेर ठूलो रुपैया झिकेको दावी सहित
समाचार बाहिरिए पछि उनका बारेमा यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । कहिले सोनिका प्रहरी फन्दामा भनेर समाचार आउँछ, कहिले सोनिकाले चाहिन् भने रवि लामिछानेलाई जे पनि गर्न सक्छिन् भनेर समाचार आउँछ मलाई यस्ता समाचारले दिमाग खराब बनाएको छ, उनले भनिन् अहिले १२ लाखको कुरा आएको छ पछि के आउने हो, हेर्दै जानु ।
Prevब्रेकिङ न्युज: आज नेपालमा एकै दिन ५७ जनामा कोरोना संक्रमण
Nextचीनले दियो भारतलाई यस्तो चेतावनी: सीमानामा जे भइरहेको छ हेरिरहेका छौ